पछिल्लो समय कोभिड– १९ (कोरोनाभाइरस)को संक्रमणबाट प्रहरी पनि जोगिन सकेको छैन । उपत्यकालगायत देशभरमा प्रहरीलाई कोरोना संक्रमण पुष्टि भइराखेको छ ।
कोरोना संक्रमणका कारण कतिपय क्षेत्रका प्रहरी चौकी, वृत्तहरू नै सिल गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ ।
पछिल्लोसमय कोरोना भाइरसका कारण महानगरीय प्रहरी वृत्त कालिमाटी सिल भएको छ । वृत्तमा काम गर्ने प्रहरी नायब उपरीक्षक (डीएसपी) रुगम कुँवरसहित १ सय ९१ जना क्वारेन्टाइनमा बस्नुपरेको छ ।
‘हाम्रो वृत्त नै सिल गरिएको छ, बाहिर जान र यहाँ आउन बन्द गरिएको छ,’ वृत्तपति डीएसपी कुँवरले लोकान्तरसँग भने, ‘स्वाब संकलन गरिएको छ, अब रिपोर्टको प्रतिक्षामा छौं ।’
वृत्तमा कार्यरत २ जनामा कोरोना संक्रमणको पुष्टि भएसँगै वृत्त सिल गरेर उनीहरूलाई क्वारेन्टाइनमा राखेर उनीहरूको कोरोना परीक्षणका लागि आइतवार स्वाब संकलन गरिएको थियो, रिपोर्ट भने अझै आइसकेको छैन ।
कोरोना पुष्टि भएका प्रहरी नाबय निरीक्षक र प्रहरी जवान सशस्त्र प्रहरीले निर्माण गरेको कोरोना अस्पतालमा उपचारत छन् ।
कसरी चलेको छ त सिल भएको वृत्तको काम ?
कुनैपनि प्रहरी कार्यालय सिल भएको खण्डमा शान्ति सुरक्षाको काम कसरी चल्छ त ? भन्ने धेरैको प्रश्न हुनसक्छ ।
यदि प्रहरी कार्यालयहरू कोरोनाभाइरसका कारण सिल गर्नुपरेको खण्डमा माथिल्लो निकायले त्यसवरपरका कार्यालयबाट प्रहरीहरूको व्यवस्थापन गर्ने नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) निरज शाहीले बताए ।
‘यदि कुनै प्रहरी कार्यालय सिल गर्नुपरेको खण्डमा त्यस कार्यालयबाट हुने काम कारवाही र अपरेसन त्योभन्दा माथिल्लो निकायले खटाएको प्रहरीले गर्छ,’ प्रवक्ता शाहीले भने ।
क्षेत्रको हकमा जिल्लाले हेर्ने र जिल्लाको हकमा प्रदेशले हेर्ने हुन्छ । जिल्लामा भएको स्वास्थ्यको टोलीले सिल गर्नुपर्ने भएमा सिल गर्छ ।
कन्ट्र्याक ट्रेसिङलयातका काम सकेर क्वारेन्टाइनमा धेरै समय राख्नुपर्ने प्रहरीलाई क्वारेन्टाइनमा राख्छ । कोरोनाको परीक्षण भइसकेपछि भने कोरोना नेगेटिभ आएका प्रहरीलाई नियमित काममा फर्काउने गरेको शाहीले बताए ।
महानगरीय प्रहरी वृत्तको कामकारवाही अगाडि बढाउनका लागि ३ ठाउँबाट प्रहरी बोलाएर कामकारवाही गरेको महानगरीय प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ ।
जनसेवा कार्यालय र महानगरीय प्रहरी वृत्त कीर्तिपुरले कालिमाटीको मातहतमा पर्ने एरियामा गस्तीको काम गरिहरको छ, भने प्रशासनिक काम महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंले गरिरहेको महानगरीय प्रहरी कार्यालयकी प्रवक्ता वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक (एसएसपी) किरण बज्राचार्यले बताइन् ।
‘कालिमाटीको अपरेसन अहिले ३ वटा युनिटले हेरिरहेको छ । गस्तीको काम जनसेवा र कीर्तिपुरले गस्ती रहेका छन्, भने काठमाडौं परिसरले प्रशासनिक काम हेरेको छ,’ एसएसपी बज्राचार्यले लोकान्तरसँग भनिन् ।
महानगरीय प्रहरी वृत्त कालिमाटीका प्रहरीलाई कोरोनाभाइरसको परीक्षण नेगेटिभ आएको खण्डमा सबै नियमित काममा फर्किन्छन् भने यदि कसैलाई कोरोना पोजेटिभ देखिएको खण्डमा अस्पताल पठाइने बज्राचार्यले बताइन् ।
पछिल्लोसयमा हिजो (सोमवार) मात्रै बारामा एक इन्सपेक्टरसहित ७ जना प्रहरीलाई कोरोनाभाइरस संक्रमण देखिएको थियो ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय बारामा अपराध अनुसन्धानमा संलग्न प्रहरी इन्सपेक्टरलाई कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो ।
शुरूमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाराका एक प्रहरी जवानमा कोरोना संक्रमण देखिएको थियो ।
त्यसपछि कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गरी ५१ जनाको पीसीआर परीक्षण गर्दा अन्य ६ जनामा पनि कोरोना पुष्टि भएको थियो ।
देशभरमा १६ जना प्रहरीलाई कोरोनाको पुष्टि भइसकेको छ ।
उनीहरूलाई नजिकको कोरोना अस्पतालमा राखेर उपचार भइरहेको प्रहरी प्रधान कार्यालय नक्सालले जनाएको छ ।
थप २ सय ९३ जनामा कोभिड संक्रमण, संक्रमितको कुल सं...
ओली–प्रचण्ड भेटवार्ता सकियो, बालुवाटारमा डेढ घण्टा ...